लोकप्रिय बन्ने होडमा कतै अप्रिय भावना दबाउनु भएको त छैन !
शब्दपाटी बुधबार, मंसिर ८, २०७८
काठमाडौं, ८ मंसिर : तपाईं प्रायः जसो यस्ता मानिसहरूलाई साथी बनाउनुहुन्छ, जसले तपाईंका हरेक कुराहरूलाई समर्थन गर्छन्— तपाईंले सोच्ने, महसुस गर्ने र बुझ्ने तरिकाहरू साथै तपाईंका रुचि र अरुचिहरू । तपाईंले आफूलाई जस्तो बनाउनु भएको छ, तपाईंले त्यसैको समर्थनको लागि कोही खोजिरहनु भएको हुन्छ ।
एकचोटि यस्तो भयो... जाडोयाममा एउटा सानो चराले अलि बढी नै मौसमको आनन्द उठायो, जसकारण दक्षिणतर्फ यात्रा ढिला आरम्भ गऱ्यो । उसले अत्यन्तै जाडोमा यात्रा शुरु गऱ्यो अनि उड्ने कोसिस गऱ्यो । तर, ऊ जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर खस्यो । त्यही बाटोबाट एउटा गाई गइरहेको थियो, अनि बाटोमै उसले गोबर गऱ्यो । गोबर ठीक त्यही चरामाथि खस्यो अनि चरा पूरै ढाकियो । गोबरको न्यानोपनले कठ्याङ्ग्रिएको चरा बिस्तारै–बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कियो अनि ऊ राम्रो महसुस गर्दै खुसीले चिर्बिराउन थाल्यो ।
यदि तपाईंको जीवनमा कोही सच्चा साथी छैनन् भने, तपाईंले केही अभाव महसुस गर्नुहुन्छ । आखिर, साथी भनेको के हो ? साथी भनेको तपाईं जस्तै अन्योलमा जेलिएको अर्को व्यक्ति न हो । साथी वा मित्र भनेको उत्तम वा पर्फेक्ट मानिस होइन । कुरा यत्ति हो कि जब दुईजना व्यक्तिहरू एकआपसमा यति सहज बन्छन् कि कम्तीमा पनि उनीहरू एक–अर्काप्रति साँचो रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, तबमात्र त्यहाँ मित्रता रहन्छ । तपाईंको साथी पनि तपाईं जत्तिकै अस्तव्यस्त र भ्रमित रहेको हुन्छ । तर, यदि दुईजनाले एक–अर्काबिच निष्ठा कायम गर्ने हो भने, उनीहरू सही अर्थमा साथी बन्दछन् । तपाईंसँग एकजना मात्रै नभई थुप्रै साँचो साथीहरू हुनुपर्छ । यदि तपाईंको जीवनमा एकजना पनि त्यस्तो साथी छैनन् भने, तपाईंले आफ्नो जीवनमा केही गर्नु उत्तम हुनेछ । किनकि, मित्रता भनेको एक–अर्काको फाइदाको लागि गरिने आदान–प्रदान वा लेनदेन होइन; मित्रता भनेको दुई जीवनहरूको विशेष मिलन हो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ८, २०७८, ०७:५०:००